Union Minister for International Cooperation arrives back after attending meetings on Human Rights and Disarmament in Geneva – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
Union Minister for International Cooperation arrives back after attending meetings on Human Rights and Disarmament in Geneva
The Myanmar delegation led by U Kyaw Tin, Union Minister for International Cooperation arrived back to Yangon on3March after attending the High-Level Segments of the 40th Session of the United Nations Human Rights Council and the Conference on Disarmament held in Geneva, from 25 to 28 February 2019.
At the high-level segment meeting of the Human Rights Council, the Union Minister deliveredaStatement on 26 February stressing the importance of guiding principles of the Council such as promoting human rights through constructive engagement and cooperation instead of confrontation and condemnation and the principles of independence, impartiality and integrity. He also apprised the meeting of the progress and challenges in the efforts of Myanmar Government for peace and national reconciliation, development, promotion and protection of human rights, resolving the issues in Rakhine State and cooperation with the United Nations in promoting human rights.
On 27 February, the Union Minister deliveredaStatement at the High-Level Segment of the Conference on Disarmament highlighting the current global security, issues on disarmament and non-proliferation, Myanmar’s continued efforts and priorities on non-proliferation and national disarmament agenda as well as its works at the Conference on Disarmament.
While in Geneva, Union Minister U Kyaw Tin, accompanied by Ambassador U Kyaw Moe Tun, Permanent Representative to the United Nations, separately held bilateral meetings with H.E. Ms. Retno Lestari Priansari Marsudi, Minister for Foreign Affairs of Indonesia, H.E. Mr. Pradeep Kumar Gyawali, Minister for Foreign Affairs of Nepal, H.E. Mr. Kiyoto Tsuji, Parliamentary Vice-Minister for Foreign Affairs of Japan, and H.E. Mr. Marcelino Medina Gonzalez, First Deputy Minister of Foreign Affairs of Cuba at the United Nations Building.
During the respective meetings, the Union Minister discussed with those Ministers on strengthening bilateral relations and cooperation, and explained the Myanmar Government’s efforts in striving for peace and national reconciliation process and promoting and protecting human rights in Myanmar, and resolving the issue of Rakhine State.
The Union Minister also received Ms. Arancha Gonzale, Executive Director of the International Trade Centre (ITC) at the Myanmar Permanent Mission in Geneva on 28 February and exchanged views on ongoing cooperation between Myanmar and ITC for promotion of trade, investment and private sector development. He also visited the Permanent Mission of Myanmar in the morning and attended the work coordination meeting with the Myanmar Permanent Representative and the members of the Myanmar Mission in Geneva, according to the Ministry of Foreign Affairs.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများ တက်ရောက်ပြီးနောက် ပြန်လည်ရောက်ရှိ
(၃-၃-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင် ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်မှ ၂၈ ရက်အထိ ကျင်းပခဲ့သည့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ အကြိမ်(၄၀)ပြည့် ပုံမှန်အစည်းအဝေးနှင့် လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး ညီလာခံတို့၏ အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍများသို့ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မတ်လ ၃ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ ရက်တွင် လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီ၏ အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍ အစည်းအဝေး၌ မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီမှ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရာတွင် ထိပ်တိုက်တွေ့ခြင်း၊ ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းအစား အပြုသဘော ထိတွေ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ လွတ်လပ်မှု၊ ဘက်မလိုက်မှုနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ စောင့်ထိန်းရေးစသည့် မူဝါဒများ၏ အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ အမျိုးသား ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်ရေး၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေး မြှင့်တင်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများဆိုင်ရာ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့် ကြုံတွေ့ရသောစိန်ခေါ်မှုများကို လည်းကောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အလားတူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၇ ရက်တွင် လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး ညီလာခံ၏ အဆင့်မြင့်ကဏ္ဍ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်၍ မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပါဝင်ပြောကြားခဲ့ပြီး၊ လက်ရှိ ကမ္ဘာ့လုံခြုံရေး၊ လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့် မပြန့်ပွားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လက်နက်မပြန့်ပွားရေးနှင့် ဖျက်သိမ်းရေးတို့အတွက် ဆက်လက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် ဦးစားပေးကိစ္စရပ်များ၊ လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး ညီလာခံတွင် ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ထည့်သွင်းရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ခရီးစဉ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း လိုက်ပါလျက် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Ms. Retno Lestari Priansari Marsud ၊ နီပေါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Pradeep Kumar Gyawali ၊ ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပါလီမန်ဆိုင်ရာ ဒုတိယဝန်ကြီး (Parliamentary Vice-Minister) H.E. Mr. Kyoto Tsuji ၊ ကျူးဘား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Marcelino Medina Gonzalez တို့နှင့် ကုလသမဂ္ဂ အဆောက်အဦ၌ နှစ်နိုင်ငံချင်း သီးခြားစီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ယင်းသို့ တွေ့ဆုံစဉ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး လုပ်ငန်းစဉ်၊ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်မြှင့်တင်ရေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စ ဖြေရှင်းရေးတို့နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် သဘောထားအမြင်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေးစင်တာ (ITC) ၏ အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Ms. Arancha Gonzale နှင့် အဖွဲ့အား ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်တွင် မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံး၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ITC တို့အကြား ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လက်ရှိ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နေမှုများအပေါ် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ယင်းနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် မြန်မာအဖွဲ့ရုံးသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး၊ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီးနှင့် မြန်မာအဖွဲ့ရုံး ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံ၍ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာနှင့်ပတ်သက်၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။